Posted by Army Soul at 3:00 PM 1 comments
Posted by Army Soul at 2:57 PM2comments
Posted by Army Soul at 5:05 PM4comments
Posted by Army Soul at 1:39 PM3comments
မိတ်ဆွေကြီး ကိုရင်ညိန်း၏ အီးဋီကာကို ဖတ်ထားဘူးလေရာ မိမိအလှည့်တွင်လည်း မည်ကဲ့သို့ နှီကာရေးရန် တွေးမရ ဖြစ်ခဲ့ရဖူးလေသည်။ ယခုတော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်.. ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလေးကို အမှတ်တရ ပြန်ပြောင်း ပြောရလေတော့မည်။
အချိန်ကား စာရေးသူ ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြင့် ဟဲဟိုးသို့လေယာဉ်ဖြင့် လိုက်ပါလာခဲ့သည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိအိမ်သာ၏ လူမအားမှုများကြောင့် အောင့်ခြင်း အမျိုးမျိုးဖြင့် အောင့်ကာ လေယာဉ်ဆိုက်သည်အထိ သည်းခံပြီး အပေါ့သွားချင်သော စိတ်ကို ချုပ်တည်းခဲ့ရလေသည်။ Luggage များကို ရွေးရန် စောင့်ဆိုင်းနေချိန်တွင် အနားရှိ လေဆိပ်အိမ်သာသို့ အပြေးတပိုင်း ထွက်လာခဲ့သည်။ အိမ်သာအတွင်းသို့ရောက်ပြီး အတန်ငယ်အကြာတွင် အလေးစွန့်သော အခန်းများဆီမှ
စာရေးသူလဲ အနဲငယ်တော့ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်ယုံတင်မက ကြောက်သလိုလိုပင်ဖြစ်မိသွားသည်။ နေ့ခင်းကြောင်တောင် သရဲခြောက်ခြင်းတော့ မဖြစ်နိုင်ဟု စိတ်ကို တင်းကာ လက်ဆေးကန်ဖက် ထွက်လာချိန်တွင်.. ။ ထို အသံမျိုးစုံထွက်သော အခန်းမှ ဦးကြီးတစ်ယောက်ထွက်လာလေသည်။ မျက်နှာကြီးကလည်း ပြုံးပြုံး၊ ပြုံးပြုံး။ ကလေးရှက်တော့ ငို၊ လူကြီးရှက်တော့ ရယ် ဆိုသကဲ့သို့ သူကရှက်ရှက်ဖြင့် ပြောပုံရသော လေသံကြီးဖြင့်..
"အေးကွာ.. အိမ်သာတံခါးချက်တွေက မကောင်းဘူးထင်ပ။ ပိတ်မရလို့ အပြင်က တစ်ယောက်လာဖွင့်မှာ စိုးလို့ကွာ အသံပြုနေရတယ်။"
စာရေးသူလည်း အိမ်သာအပြင်ရောက်မှသာ အသံထွက်ရယ်နိုင်လေသည်။ ဤဦးကြီးသင်ပေးခဲ့သော အိမ်သာဂျက်ပြသနာဖြေရှင်းနည်းကို ချစ်သူလေးကိုတောင် သင်ပေးခဲ့မိသည်။ စာဖတ်သူမျာလည်း ဤနည်းကို လိုသလိုသုံးကြနိုင်စေရန် ဝေမျှလိုက်သည်။
စာရေးသူ၏ညီမငယ်ပြောပြဖူးသော အိမ်သာနှီကာလေးကို ပြန်လည်တင်ပြရလျှင်.. အချိန်ကား အထက်အရာရှိကြီးလမ်းကြောင်းရှိခြင်းကြောင့် တပ်ရင်းတပ်မ အရာရှိအရာခံစစ်သည်များအာလုံး မအားနိုင်အောင် ရှိကြလေသည်။ မိတ်ဆွေကြီးG3 တစ်ယောက်လည်း အထက်လူကြီး နားနေမည့်နေရာတာဝန်ကို ယူရလေသည်။ မိတ်ဆွေကြီးလည်း အစစအရာရာစီစဉ်စရာများကို စီစဉ်ပြီးချိန်တွင် နောက်ဆုံး အိမ်သာဆီသို့ အသိရောက်သွားသည်။ မိတ်ဆွေကြီးလည်း အိမ်သာကို အနံအသက်ကင်းစင်ရုံတင်မက အစစအရာရာသန့်ပြန့်စေရင်တွေးရင်းတွေးရင်း အိမ်သာရေဆွဲသော ရေအတွင်းသို့ အမွေးအိတ်ချိတ်ရန် စိတ်ကူးရမိလေသည်။ စိတ်ကူးအတိုင်းပင် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်ပြီး ကျေနပ်မှုများဖြင့် စီစဉ်မှုများကို အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အထက်လူကြီးလည်း တပ်သို့ရောက်လာပါပြီ။ သြ၀ါဒခံယူမှုများ၊ တွေ့ဆုံမှုများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ရှင်းလင်းမှုများ ပြုလုပ်ပြီးချိန်များအပြီးတွင် ခရီးတစ်ထောက်ဆက်လက်မထွက်ခွာခင် ရေအိမ်ကို အသုံးပြုလေသည်။ ထို့နောက် အထက်လူကြီးလည်း ခရီးစဉ်အတိုင်း ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ မိတ်ဆွေကြီးလည်း ပင်ပန်းမှုများကို အနားယူရန် အဆောင်သို့သွားမည်အပြု… ပြသနာက စပါပြီ။ တင်လိုက်ရသော ထုချေလွှာ.. ဖြေရှင်းလိုက်ရသော စကားလုံးများ…
ဖြစ်ပုံကတော့.. မိတ်ဆွေကြီးက ရေအိမ်သုံးပြီး ရေဆွဲလျှင်တောင် မွေးပျံ့စေရန် သုံးလိုက်သော ဆေးရည်အိတ်သည် ချိတ်ထားသော နေရာမှ ပြုတ်ကျကာ..ရေဆွဲပေါက်၏ ရေထွက်ပေါက်ကို ကွက်တိကို ပိတ်မိတာ ရေဆွဲမရသော ပြသနာဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသောကြောင့်ပေတည်း။
စာဖတ်သူများလည်း သတိကြီးစွာဖြင့် ရေအိမ်ကို အလှအပဆင်နိုင်ကြပါစေရန် ရည်သန်ပြီး ရေးသားလိုက်ပါသည်။
Posted by Army Soul at 3:10 PM2comments
Posted by Army Soul at 11:41 AM5comments
“ထွန်တုံးကိုတဲ့ ခြေတော်တင် နွားကြန်စုံနှင် x x x x x “
ငယ်ငယ်တုန်းက သင်ခဲ့ရသော သီချင်းလေးကို ငြီးရင်း တပ်ပိုင်လယ်ကွင်းများဆီသို့ ခြေဦးလှည့်မိသည်။ ဒီနေ့တာဝန်က စပါးခင်းများ စစ်ရမည်။ ထို့နောက် မွေးမြူရေးကွင်းတစ်ခုကို စစ်ရမည်။ တပ်ရင်းရုံးက ထွက်လာကတည်းကတော့ Plan A , Plan B နှင့် ဟုတ်သလိုလို။ လယ်ထဲရောက်တော့ ငုတ်တုတ်မေ့ပြီ။
လယ်ကွက်များက အငှားချထားပြီး လုပ်ခြင်း မဟုတ်သောကြောင့် တနိုင်တပိုင်လုပ်ကိုင်ကြရခြင်းဖြစ်သည်။ ကွင်းထဲ ကြည့်လိုက်ချိန်တွင် အလုပ်လုပ်နေသော သူများက မိမိရဲဘော်များ။ မိမိလည်း မနေသာ မကြည့်ရက်။ လယ်ကန်သင်းရိုးပေါ်မှ နေ၍ ဟိုလိုလုပ်ပါလား….ဒီလိုလုပ်ပါလား….ဟုလည်း အချိုရည်ကြော်ငြာလည်း မရိုက်ချင်။ ဒီတော့ ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းရလေပြီ။
၀တ်လာသော ယူနီဖောင်းလေးက ခပ်နွမ်းနွမ်းဖြစ်နေခြင်းကိုပင် ကြိတ်ကျေးဇူးတင်နေမိသည်။ အကျီ င်္ကိုသင့်ရာနေရာတွင် ချိတ်ပြီး ဘောင်းဘီကို ဒူးအထက် ခေါက်တင်ကာ လယ်ကွင်းထဲသို့ ဆင်းလိုက်သည်။ ဆရာကြီးတစ်ယောက်က လှမ်းအော်လေသည်။
"ဗိုလ်ကြီး… ဟာ မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့လုပ်လည်း ရပါတယ်။"
"မထူးပါဘူး ဆရာကြီးရာ။ တစ်ယောက်ပြီးတော့ အလုပ်မြန်မြန်ပြီးသပေါ့။ ကျွန်တော်လည်း လုပ်ဖူးသွားတယ်ပေ့ါဗျာ။"
တခင်းစာ ပျိုးကျဲပြီးသည်နှင့် ခြေလက်ဆေးပြီး မွေးမြူရေးရှိရာသို့ လှမ်းလာခဲ့လိုက်သည်။ မွေးမြုရေးဆိုလို့ နွားတို့ ကြက်တို့ ၀က်တို့တော့ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ မဟာပညာကျော် တီကောင်မွေးမြူရေးစခန်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ တီကောင်ရိုးတိုးရွတလေးများ ပေါက်ဖွားနှုန်းကိုမှတ် နားမလည်သေးသည်များကိုလည်း မေးမြန်းပြီး ခန်းစက်ရာအဆောင်ဆီသို့ ခပ်သွက်သွက်ပင်ပြန်လာခဲ့သည်။ မိုးလေးများက တဖွဲဖွဲကျနေသောကြောင့် ပျိုးကျဲထားသော လယ်ကွင်းလေးဆီကိုပင် အလွမ်းပြေကြည့်ခဲ့မိသည်။ ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးခဲ့သော လယ်ကွင်းကြီး သီးပွင့်သည်အထိ မိမိမြင်နိုင်ပါအုံးမည်လား။
အင်း…. မိမိတို့ စစ်သားဘ၀က အတည်တကျပြောလို့ ဒီနေ့တွေ့ရပေမယ့် နောက်နေ့တွင် မတွေ့နိုင်တော့ပေ။မိုးသားများ တလိပ်လိပ်ကျဆင်းသွားပြီး လေငြိမ်သွားချိန်တွင် အောက်လင်းဓါတ်မီးကြီးကို ဆွဲ၍ ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလေးရှိရာသို့ အသော့နှင်ခဲ့လေသည်။ သူငယ်ချင်းများဆီကို ဖုန်းအိုကြီး တဂစ်ဂစ်နှင့် ဆက်ပြီးသွားချိန်တွင် ညီမလေးဆီကို ဖုန်းဆက်လိုက်မိသည်။
ယာယီတပ်ခွဲမှူးဘ၀ အတွေ့အကြုံများကို ပြောပြမိရာတွင် ရယ်လိုက်သော ညီမလေး.. အူတောင် တက်လောက်တယ်။ အော်… တစ်ချိန်က စစ်မြေပြင်မှာ ရန်သူတွေကို ခြေမှုန်းချိန်ကလည်း ကျွန်တော်ပါပဲ။ တိုင်းရုံးပေါ်တွင် ပန်ကာလေးအောက်တွင် အလုပ်ရှုပ်ခဲ့သူကလည်း ကျွန်တော်ပါပဲ။ ယခုလယ်စိုက်ပြီး တီကောင်မွေးနေတာလည်း ကျွန်တော်ပါပဲ…
ဘ၀ဖြစ်ပုံဆန်းကျယ်အားလုံးကတော့ စစ်သားဘ၀တွင် အတွေ့အကြုံများပင်ဖြစ်ပေတော့သည်။
Posted by Army Soul at 1:59 AM 1 comments
+ မိခင်ရင်ခွင်ဆီသို့ ခဏတာ ခိုလှုံခွင့်
မိုးတွေက မရပ်မနားကို ရွာနေလေပြီ။ တောတစ်ခုလုံးကလည်း ညို့မှိုင်းမှိုင်းဖြင့် သစ်ပင်ဝါးပင်များ လေအဝှေ့တွင် ရိုက်ခတ်သံများနှင့် တောင်တန်းများသည် မိုးစက်မိုးပေါက်များအောက်တွင် အိပ်စက်နေလေသည်။ လူနာများဆီမှ ညီးသံသဲ့သဲ့ကြားတိုင်း ရင်တွင်းကို ဆောက်နှင့်ထွင်းသလိုခံစားရသည်။ မိမိလည်း ဒီထက်ပို၍ လူနာများသက်သာစေချင်အလို့ငှာ မတတ်သာချေ။ တောင်ဆင်းလမ်းကို မိုးရေများကြားမှ သတိထားဆင်းကာ လူနာများကို ထမ်းလာသော မိမိရဲဘော်များကိုလည်း ဂရုဏာသက်မိသည်။ မနေ့ကဖြစ်ပွားသွားသော တိုက်ပွဲကြောင့် ဒဏ်ရာရလူနာများကို ရန်ကုန်သို့ပြန်ပို့ရန်တာဝန်ကို ကျွန်တော်တာဝန်ယူရသည်။ မိမိချစ်သူကို တွေ့ခွင့်ရမည်ဟု ၀မ်းသာမိသော်လည်း ယခုကဲ့သို့လူနာပို့ဖြင့် ပြန်ရမည်ကိုဖြင့် စိတ်မသက်သာ...
တပ်စုတစ်စုနှင့်အတူတောင်ငူသို့ပြန်ဆင်းလာသော လမ်းတစ်လျှောက်တွင်လည်း မိုင်းများကို ထပ်မံမနင်းမိစေရန် သတိထား သွားနေရသည်။ ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်သားများသည် မွေးဖွားလာသော အမိကျောင်းတော်များသာကွာခြားကြပြီး ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွင် တအူတုံဆင်း ညီအစ်ကိုရင်းခြာများကဲ့သို့ ချစ်ခင်ကြသည်။ ယခုလည်း စစ်ကြောင်းတွင်လိုက်ပါလာသော ၄၉မှ ညီငယ်က သူ့အသက်ကိုပင် ပဓာနမထားပဲ ကျွန်တော်တို့ ဆေးတပ်သားများကို စိတ်ပူနေပြန်သည်။
"ဆေးဗိုလ်ကြီး...စိတ်မပူနဲ့ဗျာ။ ညီ..လျှောက်တဲ့ခြေလှမ်းနောက်ကသာလိုက်။ ဆေးဗိုလ်ကြီးတို့တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ကျွန်တော်တို့တွေ မကုတတ်ဘူးဗျ"
အသက်အားဖြင့် ကျွန်တော့်ညီငယ်လောက်သာရှိသော ကောင်လေးက အားပေးစကားပြောပုံမှာ ချစ်စရာကောင်းပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့နောက်မှ ထပ်ချပ်မခွာလိုက်ရင်း တစ်နေရာအရောက်တွင်..
"ဆေးဗိုလ်ကြီး... ကျွန်တော်ဆီးသွားချင်လို့။ ဒီဖက်သွားတာ။ ဆေးဗိုလ်ကြီးရော သွားမလို့လား"
ကျွန်တော်လည်း ၄င်းက ထပ်ချပ်မခွာလိုက်ဟုဆိုသောကြောင့် သူ့ခြေလှမ်းများကို နင်းခဲ့သည်ကို အရှက်ပြေလေးဖြင့်..
"အေးကွာ..ငါလည်း မိုးအေးတော့ သွားချင်လာသလားလို့ကွ"
နောက်ဆုံးတွင် မရှိ ရှိတာကို ဖြစ်ညစ်ပေါက်ခဲ့ရသည်။
မိုးများကလည်း သည်းထန်စွာရွာသွန်းသောကြောင့် လူနာများလည်း မသက်သာလှ။ စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရသည်ကား ငှက်ဖျားပိုးဦးနှောက်ထဲရောက်သွားသော လူနာစစ်သည်တစ်ဦးသည် တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း လမ်းခုလတ်တွင်ပင် အသက်ဆုံးရလေသည်။ ကျန်ဒဏ်ရာရစစ်သည်များကိုလည်း သတိထားရသည်။ မိုးရွာလွန်းသောကြောင့် မိုင်းထိထားသောနေရာမှ အသားများပုပ်လိုက်မလာစေရန်လည်း ကြည့်ရှုရသည်။ သုံးရက်လောက် လမ်းလျှောက်လာပြီးချိန်တွင် မိမိကိုယ်တိုင်ပင် ခွေယိုင်ယိုင်ဖြစ်နေသည်။ မြေသားများကလည်း မိုးရွာလွန်းသောကြောင့် ပျော့လာကာ တောင်စောင်းတိုင်းကို သတိထားဆင်းနေရချိန်တွင် ခြေထောက်ထိပ်များက နာကျင်စပြုလာသည်။ လေးရက်မြောက်နေ့တွင် ကျွန်တော်တို့ တောင်ငူမြို့ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ။ လူက နားချင်သော်လည်း မနားနိုင်။ လူနာများကို မှီရာရထားဖြင့် ချက်ချင်းတင်ပြေးရန်အတွက် ဘူတာတွင် စီစဉ်စရာများကို စီစဉ်ရသည်။ ညီဖြစ်သူကတော့ နားနေရန်ပြောသော်လည်း လူနာများမျက်နှာကို ကြည့်ပြီး မနားရက်။ ရထားတစ်စီးရသည်နှင့် လူနာများကို သွေးချိန် အခြေအနေကောင်းတော့မှ ကျောမှ ကျောပိုးအိတ်ကိုချကာ ခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင်နိုင်တော့သည်။ တခဏမျှနားကာ သူငယ်ချင်းများနှင့် မိခင်ထံသို့ဖုန်းဆက်ကာ ပြန်လာမည့်အကြောင်းကို သတင်းပို့ရသေးသည်။
တရွေ့ရွေ့ဖြင့် ရွေးလျားလာသော ရထားတွဲရှည်ကြီးများ ရန်ကုန်ဘူတာကြီးသို့ ဆိုက်ရောက်ချိန်တွင် လူနာများအခြေအနေကလည်း ထပ်မံဆိုးရွားလာခြင်းကို မတွေ့ရတော့သောကြောင့် ရင်အေးရတော့သည်။ ဘူတာတွင် လာကြိုနေသော သူငယ်ချင်းများကလည်း ကျွန်တော့်ရုပ်သွင်ကိုကြည့်ကာ စိတ်မကောင်းကြ။ သို့သော်လည်း မည်သည့်စကားတစ်ခွန်းမျှမဆိုပဲ အိတ်များကိုသာ သယ်သွားကြသည်။ ကားကူရှင်ကိုမှီရင်း အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ ကားကလေးသိပ်ကနဲ ရပ်ချိန်တွင် ကားမှန်ပြတင်းမှ မိခင်မျက်နှာကို မြင်ရလျှင်ပင် ၀မ်းနည်းဝမ်းသာဖြစ်ကာ ကားပြင်သို့ထွက်၍ မိခင်ကို သိုင်းဖက်မိသည်။ မေမေကလည်း ကျွန်တော့်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ကာ မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျလေတော့သည်။
"မေမေရယ်..ဘာလို့များ ငိုတာလည်းဗျာ။ ကျွန်တော်ဘာမှ မဖြစ်ပဲပြန်လာတာပဲဗျာ "
မိခင်ပါးပြင်ပေါ်မှ မျက်ရည်များကို သုတ်ပေးရင်း မိခင်၏အေးမြသောရင်ခွင်ကို ကျွန်တော်တစ်ပတ်တိတိပြန်လည်ခိုလှုံခွင့်ပေးသော ကံတရားကြီးကို ကျေးဇူးတင်လိုက်မိသည်။
Posted by Army Soul at 8:34 PM6comments
Posted by Army Soul at 3:06 PM2comments
တပ်မှူးရှေ့တွင်ရပ်နေသော ကျွန်တော့ခြေအစုံသည် ပျော့ခွေသွားသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ ကောက်ခါငင်ကာဖြင့် မည်သူမျှထင်မထားသော ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကို လူစားထိုး လိုက်ရမည်။ စစ်သားနှင့် စစ်ပွဲမဆန်းသော်လည်း ဆန်းနေတာက ကျွန်တော်။ အပတ်စဉ်တူ သူငယ်ချင်း တော်တော်များများက ကျောင်းများနှင့် တပ်ဆွယ်ဆေးရုံများတွင်သာ တာဝန်ကျနေချိန်.. ကျွန်တော်တစ်ကောင်ကတော့ ချွန်ပြီး ရှေ့တန်းပါသည်။ ပါသည့်နေရာကလည်း သတင်းမွှေးသည် ဘော်ဂလိ။
မဟာတန်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲသည်လည်း နှစ်ကုန်တွင်ရှိသောကြောင့် သူသူငှာငှာ အပတ်တကုတ်ကြိုးစား စာကျက်နေချိန်တွင် ကျွန်တော့်အဖြစ်က….
စစ်သားတို့မည်သည် အမိန့်တာဝန်ကို လိုက်နာရမည်။ No Excuse.. No Complaint တပ်မှူးရုံးခန်းက ပြန်ထွက်လာကတည်းက သူငယ်ချင်းတစ်ချို့ဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး အကြောင်းကြား။ ဆေးရုံမှလည်း စောစောပြန်လာခဲ့လိုက်သည်။ ပြင်ဆင်စရာရှိသည်များကို ပြင်ဆင်.. ၀ယ်စရာများရှိနေပြန်တော့လည်း မင်္ဂလာဒုံဈေးကိုပြေး။ ဈေးကအထွက် အမိကျောင်းတော်ကြီးကို ကြည့်မိရင်း သက်ပြင်းချမိသည်။ အင်း.. နောက်သုံးလေးလကုန်လို့ အမိကျောင်းတော်ကြီးရင်ခွင်ကို နားခိုရမလား။ မီးပွိုင့်သာခြားသော ငြိမ်းအေးကိုရောက်မလား။
ပစ္စည်းပစ္စယထုပ်ပိုးပြီးချိန်တွင် နံရံမှ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ အချိန်က ညကိုးနာရီခွဲ။ တဆက်တည်းမှာပင် အိမ်ရှေ့လူခေါ်ခေါင်းလောင်းက မြည်လာသည်။ တံခါးဝတွင် ကျွန်တော်၏ အချစ်ဆုံးငယ်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က သုံးဆယ့်နှစ်ကွတ်တာပေါ်အောင် ပြုံးပြနေသော အပြုံးနှစ်စုံ။ အကြောင်းကြားထားတာကတော့ ညနေပိုင်းက။ သူတို့လည်း ဆေးခန်းပိတ်ချိန်ပြီးမှသာ လာရောက်နှုတ်ဆက်နိုင်ကြသည်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် ထိုင်နေစဉ် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး စကားမဆိုပဲ နှုတ်ဆိတ်နေကြသည်။
"မင်းကွာ… အစကတည်းက ငါတို့တားထားရက်နဲ့ကွာ။ အခုတော့ ငါတို့သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးအဝေးကြီးတွေကို ရောက်တော့မယ်။ ဘယ်အချိန်ပြန်ဆုံမယ်ဆိုတာ မသိနိုင်သလို။ ဘယ်လိုပုံစံတွေ ပြန်ဆုံစည်းကြမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်တော့ဘူး။ မင်းသာ စစ်ဆေးထဲမ၀င်ခဲ့ရင် အခုလောက်ဆို ငါတို့သုံးယောက် ဂျမေးကားကို သွားဖို့ အေးအေးဆေးဆေး ပြင်ဆင်နေရုံပဲကွာ။ "
သူငယ်ချင်းစကားကို ကျွန်တော်ဘာမှ ပြန်မတုံ့ပြန်ချင်။ ကျွန်တော့်ရွေးချယ်မှုအတွက် ကျွန်တော့် မည်သည့်အခါကမှ နောင်တဆိုတာ မရခဲ့ပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက စားအတူသွားအတူ သူငယ်ချင်းလေးယောက်သည် အထက်တန်းပညာများစုံပြီး မိမိတို့ဘ၀လမ်းကြောင်းအတွက် တက္ကသိုလ်များကို ရွေးချယ်ချိန်တွင် ကျွန်တော်သည် တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကျန်နှစ်ယောက်က အရပ်ဖက်ဆေးတက္ကသိုလ်ကို ရွေးချယ်ချိန်တွင် အခြားသော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းသားဘ၀၊ ဗိုလ်လောင်းဘ၀များတွင် ပြောင်းလဲမှုများ မရှိခဲ့သော်လည်း အမိတက္ကသိုလ်ရင်ခွင်များမှ စွန့်ခွာချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့ တပ်မတော်သားများက တိုင်းပြည်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရန် ကျရာနေရာဒေသများကို သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရသည်။ လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းလေးသည် တိုက်ဆိတ်ကာ သူငယ်ချင်းသုံးဦးသား အတွေးကိုယ်စီဖြင့် မျောနေခဲ့ကြသည်။ နှုတ်ဆက်စကားဆိုကာ သူငယ်ချင်းများနှင့် ထိုညက စောစောလမ်းခွဲခဲ့သည်။
နောက်တနေ့တွင် တဆရ(၂)မှထွက်ခွာမည့်ကားအနီးသို့ သူငယ်ချင်းများရောက်လာချိန်တွင် ရင်ထဲတွင် ၀မ်းနည်းမှုက ပြောမပြနိုင်။ သူငယ်ချင်းလေးယောက်တွင် ကျွန်တော်က ရန်ကုန်မြေမှ ခွဲခွာပြီး နောက်တစ်လတွင် ဂျမေးကားသို့ထွက်ခွာကြတော့မည့် ဆရာဝန်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နှင့် ဘယ်သောအခါမှ ပြန်ဆုံကြမည်နည်း။ ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကိုရောက်နေသော အင်ဂျင်နီယာစစ်သည်သူငယ်ချင်းနှင့်လည်း အားလုံးပြန်ဆုံနိုင်ကြမလား မည်သူမှ မဟောနိုင်။ မပြောနိုင်။
ပုခုံးပေါ်ရောက်လာသော လက်တစ်စုံကြောင့် ကျွန်တော့်အတွေးတိုကလွင့်စင်သွားသည်။ လက်တစုံရောက်လာသော အသိနှင့်အတူ ပုခုံးပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ကြယ်ပွင့်လေးများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများဆီသို့ အသိပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသည်။
"သူငယ်ချင်း ကျော်စွာ.. မင်းရွေးချယ်ခဲ့မှုက မှားတယ်။ မှန်တယ်လို့မင်းကို ငါတို့ မပြောချင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ကွာ.. ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ မင်း ဒီအ၀န်းအ၀ိုင်းက ထွက်လာခဲ့ပြီး ငါတို့နောက်လိုက်ခဲ့ပါ။ မင်းအလုပ်ကြီးက ပင်ပန်းဆင်းရဲပြီး အသက်ကိုပါ အန္တရာယ်ရှိတယ်။"
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း၏စေတနာကို နားလည်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ပြုံးပြရုံလေးဖြင့်သာ …
"သူငယ်ချင်း ငါတို့ဆေးတပ်သားတွေက ပင်ပန်းဆင်းရဲကြတယ်ဆိုပေမယ့် ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင် မတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ စစ်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေသော တပ်မတော်သားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့သူတွေ။ ငါ့တာဝန်က အသက်ကို အန္တရာယ်ရှိချင်ရှိမယ်။ ဒါပေမယ့်ကွာ အသက်ကိုတောင် စွန့်လွှတ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတောင်ရှိတာ ငါတို့က ဘာလို့နောက်တန်းကနေ ရင်တုန်နေမလည်း။ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်နှင့် ခန္ဓာကို စွန့်လွှတ်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ တပ်မတော်သားတွေကို ကုသပေးရတာကို ငါ ဂုဏ်ယူမိတယ်ကွာ။ မင်းတို့နဲ့ တနေ့တော့ပြန်ဆုံမှာပါ။"
ယာဉ်တန်းကြီး တဆရ(၂)ကထွက်သည်အထိ မျက်စိတဆုံးတွင် ရပ်နေသေးသော သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကို ကြည့်ရင်း…
ငါတို့ဆေးတပ်မတော်သားတွေက ကျန်းမာကြံ့ခိုင် တိုက်နိုင်ရန် ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း ငါတို့အမိမြေအတွက် တတပ်တအား ပါဝင်နေကြသူတွေဆိုတာ မင်းတို့ တနေ့နားလည်ပေးနိုင်ကြပါစေ…
Posted by Army Soul at 4:05 PM 13 comments
“တူးပို့၊ တူးပို့” တေးသံများသည် မြန်မာတို့၏ ရိုးရာအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်၏ သရုပ်ဖော်တေးသွားများ ပင်ဖြစ်သည်။ ရေဒီယိုလေးဆီမှ အတာသင်္ကြန်သီချင်းများကို လွှင့်ထုတ်နေလေပြီ…. သြ..မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကြီးတောင် နီးလာပြီကိုး.. ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေသော နေရာလေးကတော့ သင်္ကြန်ပွဲတော်ရောက်၍ ရေလောင်းချင်လျှင်တောင် အလောင်းခံမည့်သူကို မနည်းရှာယူရမည့်နေရာလေး…။
နယ်ဒေသလေးတစ်ခု၏ ရထားလမ်းလုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူနေရသော မနေ့တနေ့ကမှ ကျောင်းဆင်းလာသော ဗိုလ်ပေါက်စလေး ကျွန်တော်… သင်္ကြန်ဆိုတာကတော့ အများတကာလို ကားများဖြင့် မြို့တစ်ပတ် ရေပက်ခံထွက်ကြသည်ဆိုသည်မှာ ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းထဲတွင်သာ မင်းသား၊ မင်းသမီး၊ ဇာတ်ပို့များခံစားပြ၍သာ ခံစားကြည့်ခဲ့ဘူးသည်။ အမိကျောင်းတော်ကြီးမှာတုန်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဗိုလ်လောင်းများအတွက် မဏ္ဍပ်များဆောက်လုပ်ပေးပါ ဖျော်ဖြေမှုများဖြင့် မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို သုံးနှစ်တိုင်တိုင် သူငယ်ချင်းများဖြင့် ပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရသေးသည်။ အမိကျောင်းတော်ရင်ခွင်မှ ထွက်ခွာပြီး မိမိ တာဝန်ကျရာ နေရာများသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင်တော့ ကျွန်တော်တို့သည် လူငယ်လူရွယ်များပင် ဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံတော်ကပေးအပ်ထားသော တာဝန်သည် ကျွန်တော်တို့ ပုခုံးထက်တွင် ကပ်လျက်ပါခဲ့ပါပြီ။ သင်္ကြန်ဆိုတာလည်း အမိကျောင်းတော်တုံးက အပျော်ကိုသာ ပြန်စမြှုပ်ပြန်ရတော့မည့် အနေအထားသာ ဖြစ်သည်။
တေးသွားလေးတစ်ခုကြောင့် တွေးတောလိုက်သော အတွေးသည် အမိကျောင်းတော်ကြီးတွင် ပျော်ရွှင်ခဲ့ဘူးသော အတိတ်ကသင်္ကြန်ပုံရိပ်များဆီပါ ရောက်ရှိသွားကာ အနားသို့ ဆရာကြီးရောက်လာသော အခါ အတွေးတို့သည် ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက်ဖြစ်သွားလေသည်။
‘ဗိုလ်ကြီး.. ကြေးနန်းရောက်ပါတယ်။ နေရာအပြောင်းအလဲရှိပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းပြီး မနက်ဖြန်ညနေ နောက်ဆုံးထားပြီး တပ်မကို သတင်းပို့ရပါမယ်။’
ကံကြမ္မာကကောင်းချင်တာလားတော့ မသိ။ တပ်ပြန်ရမည်ဆိုရင်တော့ ရေငတ်တုန်းရေတွင်းတွေ့ ဆိုသလို သင်္ကြန်ငတ်တုံး သင်္ကြန်တွင်းလေး တပ်ပြန်ရလည်း မဆိုးချေ။ ထို့နောက် ပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းပြီး နောက်ဆုံးရထားတစ်စီးကို စောင့်ကာ တပ်ရင်းသို့ ပြန်ချီတက်လာကြသည်။ ဆရာကြီးတွေကတောင် ကိုယ့်ထက် ခြေလှမ်းမြန်နေသယောင်ယောင်။ သားသမီး၊ ဇနီးမယားကို တွေ့ချင်တဲ့ ဇောလေးက ကိုယ့်သင်္ကြန်ပိုးထပ်တောင် အားကောင်းပ။ တပ်ရင်းရောက်ပြီး သတင်းပို့စရာရှိတာများကို ပို့ပြီး အဆောင်သို့ပြန်လာခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ လူပျိုဆောင်သွားရာလမ်းလေးသည် အိမ်ထောင်သည်လိုင်းခန်းများ နားလေးမှ ဖြတ်သွားရသည်။ ရုတ်တရက် ကျောဖက်မှ အေးကနဲဖြစ်သွား၍ လှည့်ကြည့်မိလိုက်ရာ…
“ဟားဟား… ဦးဦးကို သေနတ်မှန်သွားပြီ။ စိတ်ဆိုးရဘူးနော်… ဒါသင်္ကြန်ရေ..”
ကလေး လေးများသည် သင်္ကြန်မတိုင်ခင်ကပင် ရေပြွတ်ကို အသုံးချနေကြလေပြီ။ အင်း ဘာပဲပြောပြော သင်္ကြန်ရေဆိုတော့လည်း အေးမြပါသည်။
နောက်တစ်နေ့မနက်တွင် တန်းစီအပြီး ရင်းမှူးခေါ်၍ တပ်ရင်းရုံးကို လာခဲ့သည်။ တပ်ရင်းမှူးနှင့် တွေ့အပြီး တပ်ရင်းရုံးပြန်အထွက်တွင် လူက စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်သီချင်းလို… “ကျွန်တော်လေထဲ မြှောက်တက်သွားတာလား” ဆိုသကဲ့သို့ ပျော်ရွှင်မှု အဟုန်ကြောင့် ခြေထောက်တောင် မြေကြီးဖြင့် မထိတော့သယောင် ခံစားလိုက်ရသည်။ ရန်ကုန်မြို့မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော် လုံခြုံရေးတဲ့ဗျ…….. သင်္ကြန်ပိုးလေးကျွန်တော် တစ်သက်တွင်တစ်ခါတောင် မကြုံဖူးသော မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို မြင်ရတော့မည်။ အတွေးများဖြင့် အပျော်များဖြင့် ပစ္စည်းများထုပ်ပိုးရန် အဆောင်ဆီသို့ အပြေးတပိုင်းပြန်လာခဲ့မိသည်။
ကျွန်တော်တို့တပ်စုသည် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ်ရှိ တက္ကသိုလ်များ ဓမ္မာရုံတွင် စခန်းချသည်။ ကျွန်တော့်ရင်အစုံသည် ဒိန်းတလိန်းနတ်ဝင်သလို တဒိန်းဒိန်းဖြစ် နေသည်။ ညအချိန်တွင်တောင် နာရီစက္ကန့်တံများ ရွေ့လျားးသံသည် နှေးကွေးသလို ခံစားနေရသည်။ မနက်ဖြန်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်ရင်ခုန်ရသော မဟာသင်္ကြန်အကြိုနေ့သို့ရောက်ပါတော့မည်။ တစ်ညလုံး ကျွန်တော်ကောင်းကောင်အိပ်မရခဲ့။ မနက် ငါးနာရီတွင် equipment အပြည့်အစုံဖြင့် လုံခြုံရေးစောင့်ရမည့် နေရာကို ချီတက်ကြပါသည်။ နေရာလေးကတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်း ဘွဲ့နှင်းသဘင် အနောက်နားတွင်ဖြစ်သည်။ အင်းလျားလမ်းရှိ မဏ္ဍပ်များလုံခြုံရေးဖြစ်သည်။ ကုသိုလ်ကံကတော့ တော်တော်ကောင်းနေသည်ဆိုရမည် သင်္ကြန်ပိုးလေးကျွန်တော် မဏ္ဍပ်များရှေ့တည့်တည့်နေရာမှာမှ လုံခြုံရေးတာဝန်ကျသည်တဲ့။ ယခုချိန်တွင်တော့ မဏ္ဍပ်များအားလုံးသည် လှုပ်ရှားမှုများမရှိပဲ ငြိမ်သက်နေကြသည်။ ညနေပိုင်းတွင်သာ မဏ္ဍပ်အချို့ဖွင့်ပွဲများပြုလုပ်ကြသည်။
မဟာသင်္ကြန်အကျနေ့သို့ရောက်ပါပြီ။ ကျွန်တော့်ရှေ့တွင် မြင်နေရသော မဏ္ဍပ်သို့ အရွယ်စုံအရောင်စုံဖြင့် လူများတဖြည်းဖြည်းဖြင့် ရောက်ရှိလာကာ လှုပ်ရှားမှုလေးများဖြင့် မဏ္ဍပ်သည် အသက်ဝင်လာလေသည်။ ကျွန်တော်တို့နှင့် ရွယ်တူလောက်သာရှိလောက်သော လူငယ်လေးများကလည်း တေးသွားများဖြင့် မဏ္ဍပ်ပေါ်တွင် ပျော်ရွှင်မြူးတူးကာ ကခုန်နေကြသည်။ ရေပက်ခံကားများကလည်း လမ်းမတစ်လျှောက်ပြည့်ကျပ်ကာ အင်းလျားကန်ရေများကို အန်တုကာ ပျော်ရွှင်စွာရေပက်ခံနေကြသည်။
ကံများက မကောင်းချင်တော့ ကျွန်တော့်ရှေ့တည့်တည့်မှ မဏ္ဍပ်တွင် အစ်မ၀မ်းကွဲဖြစ်သူက ရှိနေလေသည်။ ကျွန်တော့်ကို မြင်သည်နှင့် ၀မ်းသာအားရ ခုန်ပေါက်ပြေးဆင်းလာကာ ခြံစည်းရိုးနားသို့ ကပ်လာသည်။
“ဟဲ့… မောင်မောင်။ နင်ဒီမှာ တာဝန်ကျတယ်ဟုတ်လား။ ငါ့ကိုတောင် ဖုန်းမဆက်ဘူး။”
“ဟဲ့..ငါတို့မဏ္ဍပ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါလား။ ငါ့မှာ မဏ္ဍပ်ကဒ်ပိုသေးတယ်။ အင်္ကျီကတော့ ငါ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီမှာ အပိုပါလာတယ်။ အပေါ်အကျီ င်္လဲလိုက်… နင်ကံကောင်းတယ်ဟာ သင်္ကြန်မှာမှ ရန်ကုန်ကိုတာဝန်ကျတာ”
“ငါမလိုက်တော့ပါဘူး.. အစ်မ။ ငါက တာဝန်ချိန်ကြီးမှာ”
“ဟ.. နင့်အထက်အရာရှိ ရှိတာမှ မဟုတ်တာ။ ဘာဖြစ်လည်း ဆရာကြီးတွေကလည်း နင်ပြောထားရင် ဖြစ်တာပဲဟာ။ နင်ကလည်း သိပ်ကို စည်းကမ်းလိုက်နာနေပါလား။ ”
“အစ်မ… ကျွန်တော့်ကို အဲဒီလို မပြောပါနဲ့။ စစ်စည်းကမ်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အသက်ပါ။ ကျွန်တော့်တာဝန်က သင်္ကြန်တွင်းမှာ လုံခြုံရေးစောင့်နေရတာပါ။ စစ်တိုက်ပွဲမှာမှ တာဝန်စည်းကမ်းဆိုတာ ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ အသက်ကိုတောင် ပေးအပ်ပြီးမှ နိုင်ငံကို ကာကွယ်မယ်လို့ သစ္စာအဓိဌာန်ပြုထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်တော့ ဒီသင်္ကြန်အပျော်ဆိုတာ မပြောပလောက်ပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မ။ ကျွန်တော့်ကို နားလည်ပေးပါ။”
“အေးလေ… နင့်သဘောပါ။ နင့်ဘ၀ကလည်း မြင်သာမြင် မကြင်ရတဲ့ဘ၀ကြီး…..”
အစ်မဖြစ်သူလည်း စိတ်ပျက်စွာဖြင့် ပြန်လည်ထွက်သွားလေသည်။
အင်းလျားလမ်း၏ တဖက်ခြမ်းသည် ပျော်ရွှင်မှုများဖြင့် ကခုန်လှုပ်ရှားနေသော်လည်း အခြားတစ်ဖက်ခြမ်းတွင် သံလွင်ရောင်ဝတ်စုံကို ၀တ်ဆင်ထားကာ ခရေပွင့်အမည်းရောင်လေးကို ပုခုံးထက်တွင်တင်၍ အမိကျောင်းတော်ကြီးတွင် ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆင်နွှဲ၊ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရသော သင်္ကြန်နေ့ရက်များ၏ အပျော်ပီတိများကို ရင်ဝယ်ပိုက်ကာ အင်းလျားလမ်းတဖက်ခြမ်းရှိ မဏ္ဍပ်များပေါ်ရှိ ထိုပျော်ရွှင်စွာကခုန်နေသူများ ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းကင်းရှင်းရှင်ဖြင့် အေးချမ်းစွာ မဟာသင်္ကြန်ပွဲကို ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲနိုင်ရန် လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ကျွန်တော်….။
Posted by Army Soul at 4:20 PM4comments
+ မီးသတ်သမားလေးတစ်ဖြစ်လည်း တပ်မတော်သား
နွေရာသီပူပြင်းမှုက ရက်စက်မှုများစွာဖြင့် ပူပြင်းနေသည်။ လေပွေများသယ်ဆောင်မှုကြောင့် အဆောင်ရှေ့မြေတလင်းတွင်လည်း သစ်ရွက်ခြောက်များ ဘယ်ညာယိမ်းနွဲ့ကာ ရွေ့လျားနေကြသည်။ ရေရှားသော ဒေသဖြစ်သောကြောင့် သစ်ပင်ကြီးကြီးမားမား အုပ်အုပ်ဆိုင်းဆိုင်းကရှားသည်။ မြက်ခြောက်ပင်များသာ များပြားစွာ ပေါက်ရောက်မှုကြောင့် တိုက်သောလေတိုင်းတွင်လည်း ဖုန်လုံးများက တဖွေးဖွေး။ ဖန်ဝါနေမင်းကလည်း ပါဝါကုန်အောင် အပူချိန်ကို မြင့်တင်နေသလားထင်ရလောက်အောင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ ချွေးများအင်္ကျီရွှဲအောင် စိုလေပြီ။ မတတ်သာသည့်အဆုံး ကိုယ်ပေါ်မှ ယူနီဖောင်းကို ခွာရသည်။ ချွေးတိတ်စေရန် ယပ်တောင်အားကိုးဖြင့် နွေဂိမာန်ကို အံတုကာနေလိုက်သည်။ အဆောင်ရှေ့မှ မိမိနာမည်ခေါ်သံကြားသဖြင့် ထွက်လာစဉ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြင်ယောင်မိသည် ယပ်တောင် တဖျတ်ဖျတ်ဖြင့် ကျိကုံးလိုလို ဘာလိုလို။
“ဗိုလ်ကြီး… အောက်ဖက်ရာဘာခြံတွေမှာ မီးလောင်နေလို့ ဗိုလ်မှူး ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ “
ကျွန်တော် ခေါင်းနားပန်းတော်တော်ကြီးသွားသည်။ အောက်ရာဘာခြံများနှင့် ကျွန်တော်တို့တပ်ရင်းက သိပ်မနီးသော်လည်း သိပ်မဝေးလှ။ ပိုဆိုးသည်က နွေရာသီလေပွေများကြားတွင် လောင်သော တောမီး။ ချက်ချင်းဆိုသလို ကုတင်ပေါ်တွင် လွှားထားသော တီရှပ်တစ်ထည်ကို ကောက်စွပ်၊ ဦးထုပ်ဆောင်း၍ ဆိုင်ကယ်ကိုဆွဲကာ တပ်ရင်းရုံးသို့ အသောနှင်ရသည်။ ဗိုလ်မှူးမှာကြားသည့်အတိုင်း မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံရိုက်ရန် ကင်မရာကို အဆောင်တွင် ပြန်ဝင်ယူ တပ်စုတစ်စုကို မီးလောင်ရာသို့ ချက်ချင်းလွှတ်ပြီး မိမိနှင့် ရဲဘော်နှစ်ယောက်က မီးလောင်ရာသို့ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် လိုက်လာခဲ့ကြသည်။ မီးတောက်က တော်တော်ကြီးသည်။ တောမရှင်းထားသော ခြံကွက်တစ်ခုကို လောင်မြိုက်နေသောကြောင့် မီးတောက်အားက ကောင်းပြီး မီးလောင်ရာလေပင့်ဆိုသကဲ့သို့ လေပွေအပင့်ကြောင့် မီးက ဘယ်ညာယိမ်းကာ မီးပွားများကျပြီး ဘယ်ရွေ့ဘယ်က စသတ်ရမည် မသိအောင်။ မီးငြိမ်းသတ်သော ရဲဘော်များလည်း မီးပွားများ ကိုယ်ပေါ်မကျအောင် မီးလွတ်ရာသို့ ပြေးကြရသည်။ မီးလောင်မှုက တပ်နှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်လားရာသို့ ပြောင်းပြန်လောင်လေပြန်သည်။ ကျွန်တော်လည်း ဓါတ်ပုံတစ်ပုံနှစ်ပုံသာမှတ်တမ်းတင်ပြီး ဆိုင်ကယ်ကို မီးလွတ်ရာသို့ထားကာ မီးမကူးသေးသော တဖက်ကပ်ရပ်သီဟိုခြံဆီသို့ သွားကာ အခြားရဲဘော်များနှင့်အတူ မီးဖြတ်အောင် တောကိုရှင်းရသည်။ အခြားခြံများမှ ခြံအလုပ်သမားများကလည်း မီးလမ်းကြောင်းဖြတ်အောင် မြက်ခြောက်များကို ခုတ်နေသောကြောင့် ကျွန်တော်လည်း နီးစပ်ရာ သစ်ရွက်စိမ်းပင်များကို စုကိုင်ကာ မီးတောက်များကို လိုက်သတ်ရသည်။ ရေရှားသော ဒေသဖြစ်သောကြောင့် ရေကိုလည်း အလွယ်တကူမရနိုင်။ ကျွန်တော့်ရဲဘော်များက တောစီးဖိနပ်များဝတ်ဆင်ထားသဖြင့် မီးလောင်ထားပြီးသား မြေပြင်ကို လွယ်လွယ်ကူကူနင်းနိုင်ကာ လောင်ကျွမ်းမှု အတွင်းထဲသို့ ၀င်သတ်နိုင်သေးသည်။ အခြားအလုပ်သမားများက ရိုးရိုးဖိနပ်များကိုသာ ၀တ်ဆင်ထားသောကြောင့် မြေပြင်ပြာပူဒဏ်ကို ကြာကြာမခံနိုင်။
"ဆရာကြီး .. သတိထားအုံး။ လောင်နေတာက ၀ါးတွေ။ ပေါက်ထွက်တဲ့ မီးစတွေကို သတိထားဗျ။ မီးဟပ်မယ် နောက်နည်းနည်းဆုတ်။"
ကျွန်တော်စီးလာသည့်ဖိနပ်ကလည်း ချစ်သူလေးဝယ်ဆင်ထားသော ကတ္တီပါဖိနပ်အပြာလေး။ ဖုံတွေ ပြာတွေကြားမှာ လုံးပါး ပါးလေပြီ။ မီးလောင်မှု၏ မြေပြင်အပူရှိန်ကြောင့် အတွင်းသို့ မတိုးနိုင်ဘဲ မိမိရဲဘော်များကို နောက်မှ သတိပေးရသည်။ ဆရာကြီးတို့က ဇောနှင့် မီးသတ်နေသောကြောင့် မီးကွင်းအလယ်သို့ တိုးတိုးဝင်နေသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပြီ။ မီးက အပြန့်လိုက် လောင်သောကြောင့် တော်တော်နှင့် မပြီးနိုင်။ သီဟိုခြံစပ်မှ ဖုန်းကြီးကျောင်းမှ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးလည်း မနေသာတော့။ သင်းပိုင်ကိုသာရုံပြီး မီးဝင်သတ်လေသည်။ လောင်ကျွမ်းချိန်တစ်နာရီစွန်းစွန်းတွင် စတင်လောက်ကျွမ်းသော နေရာ၏ သုံးဧကစွန်းစွန်းလောက်အရောက်တွင် မီးတောက်ကျိုးကာ မီးသေလေပြီ။ လောင်ကျွမ်းသောနေရာဒေသနှင့် မြို့ကလည်း အလျှမ်းတော်တော်ဝေးသောကြောင့် မီးသတ်ကားလည်း မလာနိုင်။ နောက်ဆုံးတွင်တော့ ရဟန်းရှင်လူအများနှင့် ရဲဘော်ရဲဖက်များ ကောင်းမှုဖြင့် မီးညွန့်ကြိုးလေသည်။ ရာသီဥတုပူပြင်းမှုကို လွန်ခဲ့သော နာရီပိုင်းခန့်က စာဖွဲ့ခဲ့သော ကျွန်တော်ပင်လျှင် စာမဖွဲ့နိုင်တော့ချေ။ မီးဟပ်ထားသော ခြေလက်များနှင့် ပြာပူနင်းထားသော ခြေထောက်များကို တစ်ချက်ကြည့်ကာ မီးလောင်ထားပြီးသား မြေပြင်ကြီးကို ကြည့်ပြီး သက်ပြင်းတစ်ချက်သာ ချနိုင်သည်။ ရဲဘော်များကိုကြည့်ပြီးလည်း စိတ်မကောင်းမိ။ ရဲဘော်အချို့၏ ယူနီဖောင်းများလည်း သစ်ငုတ်များနှင့် ငြိသောကြောင့် ပြဲရွဲကုန်ပြီ။ အချို့လည်း မီးပွားများစင်သောကြောင့် ပေါက်ကုန်ပြီ။ မိမိယူနီဖောင်းဘောင်းဘီလည်း ရစရာမရှိ။ အနားများ စုတ်ပြတ်ကုန်သည်။
မီးငြိမ်းသတ်ပြီး လမ်းမဖက်သို့ ပြန်ထွက်လာချိန်တွင် အချိန်မီမီးငြိမ်းသတ်နိုင်၍ မီးလွတ်ကင်းသွားသော ခြံများမှ လူများ၏ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်နေသော မျက်နှာများကို မြင်ရချိန်တွင် ပင်ပန်းခဲ့သမျှသည် နွေဂိမာန်ချိန်တွင် မိုးပြေးလေလေးတိုက်ခတ်သကဲ့သို့ ခံစားလိုက်ရမိသည့် ကျွန်တော့်၏ တပ်မတော်သားတစ်ယောက်၏ မီးသတ်သမားဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်းလေးကို တင်ပြလိုက်ပါသည်။
Posted by Army Soul at 5:43 PM3comments
+ စိတ်ကူးနှင့် သင်္ကြန်
သင်္ကြန်ချိန်ခါရောက်လို့လာခဲ့ပြီ တူးပို့တူးပို့သံများက လေလှိုင်းထဲတွင်တောင် ပျံ့လွှင့်နေပြီ။ တာဝန်ချိန်ပြီးဆုံးလို့ အိမ်ပြန်ရမည်ဟူသော အတွေးတစ်စကြောင့် လူက မပြုံးပဲနှင့်တောင် ပြုံးနေသယောင်ယောင်။ သူငယ်ချင်းများဆီကိုလည်း သင်္ကြန်ကာလတွင်း မဏ္ဍပ်အတူတူထိုင်ရန်ကို လှမ်းကာ စီစဉ်ထားမိကာ သင်္ကြန်အပျော်များက ခန္ဓာကိုယ်တွင်း စီးဝင်နေသည်။ မနေ့တစ်နေ့ကမှ ပူပူနွေးနွေးချစ်သူရထားသော ကျွန်တော့်အဖို့ အတာသင်္ကြန်ရက်များသည် ရွှေရောင်နေ့ရက်များအဖြစ် စိတ်ကူးယဉ်နေမိသည်။ ညီးမိသည့် သီချင်းလေးက ဟဲလေး၏ “ပျော်တာပေါ့ အနားလေးကို ကပ်။ ခါးလေးကိုဖက် ပြီးတော့လေ ရေတွေ အတူတူပက်။ ပျော်တာပေါ့”
မနက်မိုးလင်းကတည်းက ပျော်နေသော အပျော်သည် ညဖက် စက်မှ ညွှန်ကြားချက် ၀င်လာချိန်တွင် ဆပ်ပြာပူဖောင်းပေါက်သကဲ့သို့ ပေါက်သွားလေပြီ။နောက်တန်းသို့ပြန်မည့် စစ်ကြောင်းရှိမှသာ လိုက်ပြန်ရသော ကျွန်တော်တို့ ဆက်သွယ်ရေး စစ်သည်များအဖို့ တာဝန်ချိန်ပြီးသည်နှင့် စစ်ကြောင်းအပြန်ကို စောင့်မျှော်ခဲ့ရသည်မှာ အမော။ ယခုညွှန်ကြားချက်က ဆက်သွယ်ရေးTower တိုင် လုံခြုံရေးအတွက် ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိနှစ်ယောက် နောက်ချန် နေခဲ့ရမည်။ ကံကဆိုးချင်တော့ Juniorများ နေခဲ့ရမည်ဆို၍ ပြေးမလွတ်သည်က မိမိ။ မိမိကဲ့သို့ မျက်တောင်လေးပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်ဖြင့် ၄၉မှ ညီလည်း ငုတ်တုတ်မေ့လေပြီ။ ညွှန်ကြားချက် ၀င်ကတည်းက ပြန်ရင် အသင့်ပြင်ထားသော အထုပ်သည် ကျွန်တော့်ကို ရီပြ နေသယောင်ယောင်။
ညကတစ်ညလုံး အိပ်လို့မပျော်။ မနက်မိုးသောက်တော့ နောက်တန်းပြန်မည့် စစ်ကြောင်းကြီးကို ကြည့်ကာ လူက ၀မ်းနည်းလာသည်။ ဗိုလ်မှူးကလည်း စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် ကျွန်တော့်ပုခုံးကို ပုတ်ကာ ထွက်သွားလေပြီ။ ၄၉ကညီကတော့ စစ်ကြောင်းထွက်သွားရာတစ်လျှောက် စခန်းချထားသည့်နေရာအဆုံးထိ လိုက်ပို့လေသည်။ မျက်နှာကတော့ တော်တော်မကောင်း။ ကျွန်တော်လည်း မိမိကိုမျှော်နေမည့် မိခင်နှင့် ချစ်သူဆီဖုန်းဆက်ရလေသည်။ တော်သေးသည် ဖုန်းကမိသေး၍။ မိခင်ကတော့ ငိုလေပြီ.. မိမိရောက်နေသော နေရာကလည်း မအေးချမ်းသောကြောင့် မိခင်ကို စိတ်ချပါဟု ပြောရန်ကလည်း မိမိကိုယ်တိုင် ရှေ့ဖြစ်မဟောတတ်တော့ မသိ။ ချစ်သူကလည်း ငိုပြန်သည်။ ခက်ရချီ။
မိခင်နှင့် ချစ်သူငိုတော့ ဒီဖေမောင်မှာ မနေသာတော့။ စစ်သားကြီးတန်မဲ့ ၀မ်းနည်းရလားဟု အပြစ်တင်လိုက တင်ပါစေ။ ကျွန်တော်လည်း အသွေးနှင့်ကိုယ် အသားနှင့်ကိုယ်ပါ။ သို့ရာသော်လည်း ကျွန်တော်တို့စစ်သားများသည် စစ်တိုက်ရန်။ စစ်တိုက်ရန်မရှိက လေ့ကျင့်ရန်။ လေ့ကျင့်ရန်မရှိက ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရန်ဟူသော စကားချက်များကို ဦးထိပ်ပန်ဆင်ကြရသည်မှာ မိမိတို့တာဝန်ပင်ဖြစ်သည်။ သြ... အများသူငါများ ပျော်ရွှင်စွာ ရေပက်ကစားနေကြချိန်တွင် တပ်မတော်သား စစ်သည်များသည် မိမိတို့၏ စိတ်ကူးရင်သင်္ကြန်လေးများကို ရင်ထဲတွင်သာ ခံစားပြီး နိုင်ငံတော်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နေကြပေသည်။
Posted by Army Soul at 2:13 AM5comments
+ ဂုဏ်ယူပါသည် သူငယ်ချင်း
နေရာတကာကြည့်လိုက်တိုင်း တောင်တန်းတွေ ပြီးတော့ မြူတွေ မိုးလေးကလည်း ဖြောက်တောက်ဖြောက်တောက် လေပြေလေးက ညင်းပြပြ နေမမြင်ရတာလဲ ဒီနေ့ ဆို ၃၊၄ ရက်ရှိပြီ။ ဒီအချိန် ရန်ကုန်တွင်တော့ဘယ်လိုနေမည်မသိ။
သူရောက်နေရာ တာဝန်ကျရာ ကရင်ပြည်နယ်တနေရာ မဲပလီ စခန်းတွင် ရာသီဥတုအခြေအနေမကောင်းတော့ပါ။ ဒီအချိန်ကတော့ ငှက်ဖျားစပြီလေ။ အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းသောငှက်ဖျားပါ။ တပ်မတော်သားများအတွက်တော့ အမှောင်ထဲက ရန်သူပါပဲ။ ဒီနေရာကိုသူရောက်နေတာ (၄)လတင်းတင်းပြည့်ပြီပေါ့။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရွာလဲမရှိ။ လူသူလဲမရှိ။ ဆေးဝါးကလဲ အလွန်ရှားပါးနေချိန်ပေါ့ ...
တစ်ရက်တစ်ရက်ဆေးရုံတက် လူနာကလဲ ၁၀ ယောက်ထက်နည်းသည့် နေ့ရယ်မရှိ။ အားလုံးက ငှက်ဖျားတွေချည်းပဲ။ ဒီကြားထဲ မိုင်းထိလူနာကလည်း (၁)လအတွင်း အယောက် (၂၀)လောက် amputation (ခြေထောက်ဖြတ်ရတာ) လုပ်နေရသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ ဂရုမစိုက်ဖြစ်တော့။ လူရုပ်ပေါ်တော့မည်မထင်။ ရန်ကုန်တွင်နေသော ချစ်သူနဲ့လဲ အဆက်အသွယ်မရတာ တော်တော်ကြာခဲ့ပြီ။ သူကော အစဉ်မှပြေရဲ့လား။ သူဘာတွေလုပ်နေမလဲ၊ ကျွန်တော်မသိနိုင်တော့ပါ။ သတိကောရပါသေးရဲ့လားချစ်သူ။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲလေ တာဝန်ကတော့ တာဝန်ပဲပေါ့။
မိုးတွင်းဝင်လာသောအခါတွင် သောင်းကျန်းသူများလဲ ပျောက်ကုန်ပြီ။ မိုင်းထောင် ဆက်ကြေးတောင်း အလုပ်ပဲလုပ်ကြတော့သည်။ သူတို့ လည်း ငှက်ဖျားကြောက်ကြသည်လေ။ မကြောက်နိုင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ပါပဲ။ တစ်တောဝင် တစ်တောထွက် နိုင်ငံတော်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေရသည်။ ဟိုနေရာသတင်းရ ဟိုနေရာလိုက်။ ပြေးတမ်းလိုက်တမ်းကစားနေရသည်။ အဲဒီတော့ ခြေထောက်တွင် မျက်စိ မပါသောကြောင့် မှိုစားကြရသည်။(မိုင်းထိခြင်းကို စကားဝှက်)။ တိုင်းပြည်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိ ပြည်သူအတွက်လဲ အကျိုးမဲ့သော သောင်းကျန်းသူများရဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါပဲ။
ဒီနေ့နေလို့ သိပ်မကောင်းဘူးဟု သူထင်နေသည်။ ချမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်နေသည်။ ရာသီဥတုကြောင့်လော။ တနေကုန် လူနာကြည့့် နေရလို့သိပ်သတိမထားမိ။ ညနေပိုင်းကြမှပိုသိသာလာသည်။ ဒါငှက်ဖျားပဲ။ သူ့လက်ထောက်ဆရာကြီးကို ပြောပြမိသည်။ ဆိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင် သူပဲရှိသည်။ ဦးလေးတယောက်လို အစ်ကိုတယောက်လို သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့လို့လဲ ခင်မင်မိသည်။
"ဆရာကြည်ရေ ကျွန်တော်တော့ ငှက်ဝင်ပြီနဲ့ တူတယ်ဗျာ"
"ဟာ ဒေါက်တာ ကာကွယ်ဆေးမသောက်ထားဘူးလား။"
"ကျွန်တော် မအားတာနဲ့ မသောက်ထားမိဘူးဗျာ၊ ပြတ်သွားတာ တော်တော်ကြာပြီ။"
"ဘယ်လို ဖြစ်တာတုန်း ဒေါက်တာရယ် ဒီဒေသအကြောင်းလဲသိရဲ့ သားနဲ့။ ဒေါက်တာ artesunate ထိုးပေးရမလား။ ပြင်ထားလိုက်မယ်လေ။"
"နေဦးဗျာ artesunate ကိုနှမြောတယ်ဗျာ။ မနေ့ ကတက်လာတဲ့ ရဲဘော်လေးတွေ အတွက်ချန်ထားလိုက်ပါဗျာ။ နောက်လဲ ဒီရာသီ မကုန်မချင်းလာနေဦးမှာပဲ။ save လုပ်ထားလိုက်ပါဦး။"
"မဟုတ်တာ ဒေါက်တာ ကလဲ ဒီကိစ္စ မပေါ့ပါနဲ့ဗျာ။ သိပ်ကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်။ ဒေါက်တာက ဒီမှာခေါင်းပေါင်းနော် လဲလို့ မဖြစ်ဘူး။"
"ရပါတယ် ဆရာကြည့် စေတနာကို နားလည်ပါတယ်။ quinine ပဲပေးဗျာ။"
"ကျွန်တော် immune ကောင်းပါတယ်။ အချိန်တန်တော့ subside ဖြစ်သွားမှာပါ။"
နောက်ပိုင်းလူနာတွေပိုများလာသည်။ နေမကောင်းလဲ နားလို့မရ။ ကိုယ်မရှိလို့မဖြစ် အားငယ်နေသော မျက်လုံးတွေကို သနားသည်။ နှစ်သိမ့်ပေးချင်သည်။ ကိုယ်လို မိဝေးဖဝေး အနေဆင်းရဲ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကို ပြုစုရဦးမည်။ မနားနဲ့ မနားနဲ့ မင်းနားလို့ မဖြစ်ဘူး။
ကိုယ့်ကို ကိုယ် သတိပေးနေရသည်။ လူကတနေ့ တခြားကျလာသည်။ ခေါင်းကလဲတချက် တချက်ကိုက်လာသည်။ ဘေးကတော့ ဆရာကြည်က အရိပ်တကြည့်ကြည့်။ ဒေါက်တာနားတော့နားတော့ အချိန်တိုင်းပြောနေသည်။ နောက်ပိုင်းခေါင်းမထောင်နိုင်တော့ အဖျားကပိုဆိုးလာတော့သည်။ မရတော့။ တပ်မဆေးမှူးအစ်ကိုနှင့် ၇၀ ကိုင်တော့(ဆက်သွယ်ရေးစကားပြောခြင်း)။ ညီလေးရေ မြွေ နှစ်ကောင်ခေါင်းပေါင်းကိုယ်တိုင် လင်းနို့ဖြစ်နေပြီပေါ့။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂရုစိုက်ပါကွာဆိုပြီး အားပေးသွားသည်။ လူတော့ လဲပေးရ အရမ်းခက်နေတယ်ဟုပြောသွားသည်။
နောက်ပိုင်းမရတော့ artesunate တင်ရတော့သည်။မရတော့ လူကအိပ်ယာထဲက မထနိုင်တော့ပြီ။ ကယောင်ကတန်းတွေ မြင်လာသည်။ တပည့်ကို သေနတ်အပ်ထားရသည်။ ငါတောင်းလဲမပေးနဲ့၊ စိတ်ကယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်ပြီး ဖေါက်လာမှာစိုးရသည်။ အဲဒီအချိန် ရန်ကုန်ကအမေ့ကို သတိရသည်။ အရမ်းအားငယ်လာသည်။ ပြီးတော့ ချစ်သူ။ သူကော သတိမှရရဲ့ လား။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဖျားနာနေချိန် ပြုစုခဲ့သောအမေ။ အခု ကျွန်တော့်ဘေးမှာ ဘယ်သူမှမရှိ။ နောက်တော့ အမှောင် အတိကျသွားသည်ကိုသာ သိတော့သည်။ ဘာမှမသိတော့။ နောက်ဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားလဲ ကျွန်တော် မသိတော့။ ကျွန်တော်အဝေးကြီးကို လွင့်ထွက်သွားသည်။ အဆုံးအစမဲ့ အမှောင်ကမ္ဘာကြီးထဲကို။ ကျွန်တော်သတိရလာတော့ မျက်နှာကျက်ဖြူဖြူ ပြီးတော့ ပန်ကာကြီး။ ကျွန်တော် ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ ဘာမှစဉ်းစားလို့မရတော့ပါ။ ဘေးမှာတော့ ကျွန်တော့်အမေလေ။ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီး ပြုံးနေတယ်။
သားသတိရပြီလားတဲ့။ မျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်စတွေနဲ့ပေါ့။ ကျွန်တော့်အမေ့ကိုကြည့်ပြီး ချုံးပွဲချငိုလိုက်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က လူကြီးဖြစ်နေပြီလေ။ ထိန်းနိုင်ရမှာပေါ့၊
ပြီးတော့ကို ပထမဆုံးမေးမိတဲ့သူက ကိုယ့်ချစ်သူလေ
သားရယ်တဲ့ ဒါသဘာဝတွေပါပဲ တဲ့။ သူက စစ်သားမိန်မ လုပ်ရမှာကြောက်တယ်တဲ့ကွယ်။ သူအဲဒီဒဏ်တွေကြောက်တယ်တဲ့ အမြဲတမ်းပူပင်သောကရောက်နေ ရတယ်တဲ့
ရပါတယ်ကို သူ့ ကိုခွင့် လွှတ်လိုက်ပါတယ်လို့ ပဲပြောပေးပါ။
သူကြားနိုင်ပါစေလို့ ရယ်ပေါ့။ ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာရောက်ရာက် နိုင်ငံတော်တာဝန်ကို ဦးလည်မသုန်ထမ်းရွက်နေတဲ့ စစ်သားတွေမှာ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဘယ်မှာအချိန်ရှိနိုင်ပါ့မလဲ။ ဘာပဲပြောပြောလေ ကျွန်တော် ချစ်တဲ့တပ်မတော် ကျွန်တော်ချစ်တဲ့စစ်သားတွေ အတွက်ပေးဆပ်ရတာကိုပဲ ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်လေ။ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ နိုင်ငံတော်အတွက် ကျွန်တော်ဟာ အမြဲတမ်းသားကောင်းရတနာဖြစ်နေအောင်ပဲ ကြိုးစားရင်း………………
(စစ်ဆင်ရေးမှပြန်လာပြီး cerebral malaria နှင့် ဆေးရုံတက်နေသောသူငယ်ချင်း အမြန်ဆုံး ကျန်းမာပါစေဆုတောင်းလျက်)
Posted by Army Soul at 8:35 PM9comments
+ ခေတ်သစ်အိုင်တီ စစ်သည်
တာဝန်ကျရာ တပ်စခန်းသို့ ရောက်ရှိလာချိန်တွင် ယခင်အချိန်တွေတုန်းကလို တာဝန်က မသေးတော့။ မိမိကိုပေးအပ်ထားသော တာဝန်ဝတ္တရားများက မိမိတို့ကို ပေးအပ်ထားသော ရာထူးအလိုက် ကြီးမားလှသည်။ စရောက်လို့ဖြင့် မကြာသေး ဋ္ဌာနချုပ်ကို စာရင်းများတင်ရန်ကိစ္စကပေါ်လာသည်။ တော်သေးသည် မပြောင်းလာခင်ဝယ်ခဲ့သော Note Book လေးက အသုံးတော့ကျသား။ စာရင်းအင်းများကို ရုံးတွင်ရော မိမိအဆောင်ပြန်ရောက်ချိန်များတွင်ပါ ပြုလုပ်နေရသည်။ ရုံးတက်ရုံးဆင်းကို ကွန်ပျူတာလေးဖြင့် စတိုင်လိုလို မလိုင်လိုလိုဖြင့်…
ကြာကြာပင် မလိုင် မကျနိုင်လိုက်ပါ… လုံခြုံရေးစခန်းစစ် ထွက်ရမည့်အရေးက ပေါ်လာပြန်သည်။ Equipment များကို ပြင်ဆင်ရင်း စိတ်ဓါတ်တော်တော်ကျလာသည်။ ဋ္ဌာနချုပ်က ကိစ္စကလည်း တစ်ပတ်အတွင်း ပြီးစီးရမည်။ လုံခြုံရေးဆိုပေမည့်လည်း အနည်းဆုံတော့ လေးငါးရက်အသာလေး။ နောက်ဆုံးစဉ်းစားမရသည့်အဆုံး ကျောပိုးအိတ်အတွင်းသို့ Note Book မဟာကို သွတ်သွင်းရတော့သည်။ တော်သေးသည် ရာသီဥတုက ကိုယ့်ဖက်ရှိပြီး ဆောင်းတွင်းဖြစ်နေသောကြောင့်သာ မဟုတ်လို့ကတော့ တိုင်ပတ်ဖွယ်ကိစ္စ။ မိမိအဖြစ်ကိုလည်း မိမိကြိတ်ရယ်မိသည်။ သေနတ်မလွယ်ရဘဲ Note Book လွယ်ကာ လုံခြုံရေးစခန်းစစ် လိုက်ရမည် ဆိုတော့လည်း ခေတ်သစ် အိုင်တီစစ်သည်ပေါ့။ စိုင်းဆိုင်မောလ်သီချင်းလေးဖြစ်တဲ့ တောင်ပြာတန်းကသိတယ်သီချင်းကို ညီးရင်း Equipment များကို ပြင်ဆင်နေကာ CQကြီးအလာကို စောင့်နေလိုက်သည်။
သိပ်မကြာခင်အချိန်တွင် အဆောင်ရှေ့သို့ ဆိုင်ကယ်ထိုးရပ်သံကို ကြားလိုက်ပြီး CQကြီး သတင်းလာပို့လေသည်။
“အားလုံးအဆင်သင့် ဖြစ်ပါပြီ xxxxx”
ကျွန်တော်လည်း ကျောပိုးအိတ်ကို ကောက်လွယ်ကာ အဆောင်ရှေ့သို့ထွက်လာခဲ့သည်။
“ကဲ ကျွန်တော့်ကို ရုံးမှာချ ပြီးတော့ဆရာကြီးတို့ဆိုင်ကယ်တွေ ပြန်ထားလိုက် တပ်ရင်းမှူးကို သတင်းပို့ပြီး ရုံးကစောင့်နေမယ်။ သတင်းလာပို့တာတောင် ဆရာကြီးတို့က ဆိုင်ကယ်တွေ ယူလာသေးတယ်ဗျာ။ ပြန်ထားတာနဲ့ ဘာနဲ့ အချိန်က နှောင့်နှေးတော့မယ်။”
တပ်ရင်းရုံးရောက်တော့လည်း အမြောက်တပ်သားကလည်း ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနှင့် ရောက်နှင့်နေသည်။ ကျွန်တော်လည်း တပ်ရင်းမှူးကို သတင်းပို့ပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့ချိန်သည့်တိုင် ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးက ရှိမြဲသာ။
“ဟ… ဆရာကြီး ကျွန်တော်ပြောထားတာတောင် ဘာလို့ပြန်မထားသေးတာလည်း”
“xxxxx စခန်းတွေက ဝေးတယ်။ သွားရေးလာရေးက ခြေကျင်ဆို ရက်ကြာမယ်။ ဒါ့ကြောင့် xxxxx လည်း သွားရတာ အဆင်ပြေအောင် ဆိုင်ကယ်နဲ့ သွားဖို့်xxxxx ကို သတင်းပို့ မလို့ပါ။”
ကျွန်တော်လည်း ကြိတ်ပြုံးမိသည်။ မိမိအတွက် ကျောမှာလွယ်ထားသော ကိုယ်တော် Note Book ကြီးက ကောင်းပေစွ၊ ကောင်းပေစွဟု ထောက်ခံနေသလိုလို။ မတတ်သာသည့်အဆုံး ဆိုင်ကယ်ကိုခွ ရတော့သည်။ CQ ကြီးက ဆိုင်ကယ်တစ်စီး။ အမြောက်တပ်သားနှင့် မိမိကတစ်စီး။ စိန်ပြောင်းကြီးကို မိမိနှင့် အမြောက်တပ်သားကြား ချပြီး ညှပ်ကာ လုံခြုံရေးစခန်းစစ်ထွက်ခဲ့ရသော ခေတ်သစ်အိုင်တီစစ်သည်လေး ကျွန်တော့်အဖြစ်ကို ပြန်တွေးမိတိုင်း ပြုံးမိပါသည်။
Posted by Army Soul at 12:25 AM6comments
+ ခေါင်းစဉ်ပြောင်းသွားသော ပန်းဖိုး
တိုင်းရုံးပေါ်ကိုရောက်တော့လည်း ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းများကို သတိရမိသည်။ ကျောင်းတက်လိုက်ရသော နှစ်အားဖြင့် သုံးနှစ်တာစွန်းစွန်းသာ ဖြစ်ပေသော်လည်း ခင်မင်မှုများက ညီအစ်ကိုရင်းများကဲ့သို့ပင်…
ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကလည်း တစ်ဖွဲ့လုံးရှေးဘ၀က ကုသိုလ်တူတူလုပ်ခဲ့လေသလား မပြောတတ်။ အမိကျောင်းတော်ကြီးမှ ခွဲခွာရပြီး မိမိတာဝန်ကျရာ တပ်စခန်းများသို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ရောက်ခဲ့ကြပြီး မဟာသင်တန်းတက်ရောက်ရန် ခေါ်ဆိုခံရသော အချိန်တွင်လည်း ဒီသူငယ်ချင်းတစ်အုပ်က ချယ်ရီတွေဝေပြီး နေကြာရိုင်းတွေနှင့် အတိုင်းမသိအောင် လှပနေသော ပြင်ဦးလွင်မြို့လေးတွင် ပြန်လည် ဆုံဆည်းခွင့် ရကြပြန်လေပြီ။ ဗိုလ်လောင်းဆိုသော အနေအထားလေးမဟုတ်တော့သော မိမိတို့ပခုံးပေါ်တွင် ရောက်ရှိလာသော တာဝန်များကြောင့် မိမိတို့အသွင်သဏ္ဍာန်များသည် ရင့်ကျက်မှုများဖြင့် ပြည့်နှက်ကောင်း ပြည့်နှက်နေပေလိမ့်မယ်။ သို့သော်လည်း မိမိတို့၏ သူငယ်ချင်းများကြား ခင်မင်မှုများသည် အစဉ်နုပျိုဆဲဖြစ်သည်။ မိမိဘ၀ကသာ မပြောင်းလဲပဲ နောက်တွဲမရှိသော်လည်း မိမိသူငယ်ချင်းအချို့ကတော့ နောက်တွဲများဖြင့် မဟာသင်တန်းသို့ လာရောက်တက်ရောက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း သူငယ်ချင်းအိမ်ထောင်သည်၏ အိမ်ကိုပင် အားမနာရှာမကြိုး စားအိမ်သောက်အိမ်လို သဘောထားကြရသည်။ သူငယ်ချင်းမိန်းမ မငြိုငြင်အောင်ကလည်း စီးပွားရေးပြုလုပ်ရန်အကြောင်းများကို ထမင်းစားရင်း သောက်ရင်းပြောရသည်က အမော။ ထိုအချိန်ကလည်း ကျွန်တော်တို့တွေ လခက တစ်လမှ (၁၅,၀၀၀) တည်း။ တစ်လနှင့် တစ်လ လောက်တယ်လို့ကို မရှိဘူး။
နောက်ဆုံး သူငယ်ချင်းမိန်းမက စိတ်မရှည်တော့ပဲ ပန်းစိုက်ပျိုးရန် အဆိုတင်သွင်းလာ၍ ကျွန်တော်တို့တွေလည်း ရရှိသော မြေကွက်လပ်ကြီးတွင် ပန်းစိုက်ပျိုးရန် တစ်ပျော်တစ်ပါးပြင်ဆင်ကြသည်။ ကျောင်းမသွားခင် ရေလာပြေးလောင်းလိုက်။ ကျောင်းကပြန်လာလျှင် ကိုယ့်အဆောင်ကိုယ်မ၀င်နိုင် သူငယ်ချင်းတစ်အုပ် သုတ်သုတ် သုတ်သုတ်ဖြင့် ပန်းခင်းဆီသွား ရေလောင်းပေါင်းသင်။ နောက်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ပန်းသည်လိုလို ထင်လာတယ်။ ရွက်ဖျန်းတွေ ဖျန်းပက်ပေးရတယ်ဆိုတော့လည်း အမောပဲ.. ရှိတဲ့လစာထဲက ရှိစုမှတ်စုနဲ့ ၀ယ်ပြီး ဖျန်းပက်။ ရွက်ဖျန်းတန်ခိုး တယ်ကြီးသကိုး သန်လိုက်တဲ့အရွက်တွေ ဂန္ဓာမာပွင့်ထက်တောင် သူကကြီးနေသေး။ အပွင့်တွေ ပွင့်လာတော့ မိမိတို့အောင်မြင်မှုဆိုပြီး ဓါတ်ပုံတွေ တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ ပန်းခင်းကြီးနှင့်အတူရိုက်လိုက်ကြတာ။ အပျော်တွေကတော့ ဒီအချိန်ထိရှင်သန်နေဆဲပဲ။
ပန်းတွေရောင်းတော့မှ ပြသနာကစသည်။ ရောင်းရသော ငွေကို ကြည့်ကာ သူငယ်ချင်းတစ်အုပ် ငိုရခက်ရီရခက်။ ကျွန်တော်တို့ ပန်းရောင်းတဲ့အချိန်က ပြင်ဦးလွင်တွင် ပန်းတွေ အရမ်းပေါသောကြောင့် ပန်းဈေးကျနေသော အချိန်တဲ့လေ….။ နောက်ဆုံးတွင်တော့ သူငယ်ချင်း၏အမျိုးသမီးက အလယ်တွင် ပုံထားသော ပန်းဖိုးရောင်းရငွေကို ကောက်ယူသွားကာ… ပြောလိုက်ပုံက
“ပန်းစစိုက်ကတည်းက ပန်းရောင်းသည်အထိ နေ့တိုင်းအိမ်မှာထမင်းစားတာဆိုတော့ အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ ဒီပန်းရောင်းရဖိုးနဲ့ဆို ကျေသွားပြီတဲ့” ဗျ။ ကျွန်တော်တို့လည်း ပန်းရောင်းရငွေဖြင့် Grand Royal Label တောင် မတပ်လိုက်ရပါဘူး။ သူမ က ထမင်းဖိုး Label တပ်သွားလေသည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း စီးပွားရေး အကျော်အမော်ပညာရှင်ကြီး ပအို့ဝ်လေးပြောလိုက်ပုံကတော့
“ထင်တော့ထင်သား.. ငါပါရင် မင်းတို့ ၀က်ပုံပြင်ပဲဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ”
အားလုံးမှာ ငိုအားထက်ရယ်အားသန်ခဲ့ရသော ပြင်ဦးလွင်၏ ဆောင်းညများကို သတိရလျက်
Posted by Army Soul at 12:07 AM2comments
ကျွန်တော့်၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ၏အကြောင်းသည် ပြောလို့မှမကုန်။ ရေးလို့မှမဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းသည် စီးပွားရေးကတော့ တော်တော်ကို အမြင်ကျယ်သည့် သူတစ်ဦး။ ဗိုလ်လောင်းဘ၀ကတည်းက စီးပွားရေးလုပ်သည်။ အိမ်ကပို့လိုက်သော ပိုက်ဆံများကို ခြစ်ကုတ်စုသည်။ အတော်လေးစုမိတော့ ဆရာကြီးတစ်ယောက်ထံမှ ၀က်ပေါက်တစ်ကောင်ဝယ်ကာ ဒိုဗီ မသန်းထံတွင် ၀က်ပေးမွေးလေသည်။ မိမိကသားပေါက်ကိုပေး၍ လက်ခံမွေးထားသူက ကျွေးပေးရခြင်းဖြစ်ပြီး ၀က်ပြန်ရောင်းချိန်တွင် တစ်ယောက်တစ်ဝက်ခွဲယူခြင်းစနစ်ဖြစ်သည်။ ၀က်ပေါက်ကို စပေးသည့်နေ့မှစ၍ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူတစ်ယောက် တွက်ချက်ရေးစီမံကိန်းကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ပါတော့သည်။ ထိုနေ့ရက်များသည် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူအတွက် ရွှေရောင်နေ့ရက်များဖြစ်ခဲ့သည်။ ၀က်ရောင်းပြီးလျှင်တောင် ကျွန်တော်တို့ကို OutPass ထွက်သည့်နေ့ ဒကာခံမည်ဆိုတာတောင်ပါသေး။ ကျွန်တော်တို့တောင် ရောယောင်ပြီး ၀က်ကြီးအစားများများစားပါစေ ကြိတ်ဆုတောင်းနေသေးသည်။ ၀က်ကြီးလှတော့ ဈေးရမည်ပေါ့…
တစ်နေ့သောချယ်ရီတွေပွင့်သော ရက်လေးတစ်ရက်တွင် ငိုမလိုမျက်နှာဖြင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ အခန်းအတွင်းသို့ဝင်လာသည်။
“ဘာ” ကျယ်လောင်သော အာမေဋိတ်သံသည် ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းတစ်အုပ်ဆီမှ တပြိုင်တည်းကို ထွက်ပေါ်လာသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်… သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ၏ ၀က်ကြီးသေသွားသည်တဲ့။ သေသွားတဲ့ဝက်ကို ရတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းလိုက်ရလို့ပိုက်ဆံတောင် သိပ်မရလိုက်လို့ ဒိုဗီ မသန်းက ကျွေးစရိတ်အဖြစ်ပြန်ယူလိုက်သည်တဲ့။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူမှာ ငိုရခက်ရယ်ရခက်။
သူငယ်ချင်းရေ.. မင်းအကြောင်းကို ရေးလိုက်တာ စိတ်မဆိုးနဲ့ကွာ။ မင်းမွေးထားတဲ့ငါးတွေ ရေကြီးလို့ပါသွားတယ်ဆိုတာ ကြားလိုက်ရလို့ မင်းကို မွေးမြူရေးမလုပ်စေချင်တော့ဘူး။
Posted by Army Soul at 10:57 AM9comments
Posted by Army Soul at 9:58 PM7comments
ကျောင်းဆင်းအရာရှိလောင်းဘ၀မှသည် ယနေ့ထိတိုင် ကျွန်တော့် မိခင်ကို မျက်ရည်ကျအောင် ကျွန်တော်ပြုလုပ်ခဲ့မိသည်။ ထိုမျက်ရည်များက ၀မ်းသာလွန်းလို့ မျက်ဝန်းအိမ်များ စိုစွတ်လာသော မိခင်တစ်ယောက်၏ နွေးထွေးသော မျက်ရည်များဖြစ်သည်။ ကျောင်းဆင်းလို့ အရာရှိငယ်ဘ၀ဖြင့် ကျွန်တော်တာဝန်ကျရာတပ်သို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် အမေသည် ကျွန်တော့်ကို မူကြိုကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို ကျောင်းလာပို့သကဲ့သို့ပင် မြင်ပုံရသည်။ တတွတ်တွတ်ဖြင့် မှာမဆုံး။ ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်လာသော အကြော်ဘူးများကလည်း တစ်ယောက်တည်း စားလို့ကတော့ တော်တော်ဖြင့်စားကုန်မှာမဟုတ်။ ကျွန်တော့်အဆောင်ရှေ့မှ ပြန်လည်ထွက်ခါသွားချိန်တွင် မျက်ရည်များတသွင်သွင်ကျကာ လက်ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့သော အမေ....
စစ်သားတို့တာဝန်အတိုင်းကျရာနေရာတွင် ကျရာတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေရသောကြောင့် အမေ့အိမ်သို့မပြန်ဖြစ်ခဲ့။ အမေကတော့ သားမောင်စစ်သားကြီးဆီသို့ လူမလာနိုင်တောင် စာလွှာလေးများရောက်အောင် အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော်မေ့မရသော ၂၀၀၈ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ၏ရက်တစ်ရက်တွင် ရှေ့တန်းထွက်ရမည်ဟု အမေ့ကို အကြောင်းကြားလိုက်ချိန်တွင် အမေ မူးလဲသွားခဲ့သည်တဲ့။ အကြောင်းကြားပြီး နှစ်ရက်အကြာတွင် အမေ..ကျွန်တော့်ဆီရောက်လာပါသည်။ စကားပင်မပြောပဲ ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ပွတ်ကာ ဘုရားစာများကိုသာ နာရီတော်တော်ကြာအောင်ရွတ်ပေးနေတဲ့ အမေ.....
ကျွန်တော်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်သို့ရောက်ရှိချိန်တွင် ကျွန်တော်သတိအရဆုံးကတော့ ကျွန်တော့်ချစ်သူထက် အမေ့ကိုသာဖြစ်သည်။ မျှော်မိသော စာများသည် အမေ့ဆီမှ စာများပင်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ပစ်ကျခတ်ကျတိုင်း မျက်ဝန်းအိမ်တွင် အမေ့ကိုသာ မြင်ယောင်မိသည်။ ယန်းငွေ့တွေဝေနေတဲ့ စစ်မြေတလင်းက အမေ့သားရင်သွေးက အမေနှင့် အမေ့ လိုပဲသားတွေကို ချစ်တဲ့ မေမေတွေကို ကာကွယ်ဖို့ တိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီ အမေ...
၂၀၀၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ရက်.. ကျွန်တော်တို့စစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတပ်တွေ နောက်တန်းပြန်ရပြီ အမေ.. တောင်ငူကို ရောက်တော့ အမေ့ဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး "ကျွန်တော် မသေဘူး အမေ။ အမေ့ဆီ ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့မယ်" လို့ပြောလိုက်ချိန် ချုံးပွဲချငိုခဲ့တဲ့ အမေ....
"အမေ.. အမေကတောင် သားတစ်ယောက်တည်းကို ဒီလောက်တောင် စိတ်သောကရောက်ပူပင်နေတယ်ဆိုရင် သားသူငယ်ချင်း အမွှာနှစ်ယောက်အမေဆို ဘယ်လိုလုပ်မလည်း..အမေ။ သူတို့တွေဆို ဒီသားလေးနှစ်ယောက်တည်းရှိတာကို စစ်ထဲသွင်းလိုက်ရတာ ဘယ်လောက်တောင် ပူပင်နေမလည်းဗျာ။" အမေပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးဖြင့် ရင်ထဲကို အေးကာ အမေ့ရင်ခွင်သို့ တိုးဝင်မိခဲ့သည်။
အမေပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကတော့ "သားရယ်...ဘယ်မိဘမဆို သားတစ်ယောက်ဖြင့်ဖြင့် နှစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ် ပူတာကတော့ အတူတူပါပဲ။ သားသူငယ်ချင်းအမေကတော့ အမေ့ထက်ကို စံပြဖြစ်သင့်တဲ့သားကောင်းမိခင်တစ်ယောက်ပါ။ သား ဒီလိုဘေးမသီရန်မခပဲပြန်လာတာတောင် မေမေဒီလောက်ဝမ်းသာရင် သားသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ မေမေလည်း နှစ်ဆ၀မ်းသာသွားမှာပါကွယ်။ သားလေးက မေမေ့အတွက် ထာဝရမူကြိုကျောင်းသားအရွယ်လေးပါကွယ်။"
Posted by Army Soul at 1:56 AM7comments
Posted by Army Soul at 12:39 AM5comments
အမြဲလာရောက်အားပေးနေကြသော သူငယ်ချင်းများ၊ တခါတရံရောက်လာတတ်သော စာဖတ်မိတ်ဆွေများ၊ လမ်းမှားပြီးရောက်လာတယ်ဟု ပြောဆိုတတ်ကြသော အမြင်မတူပေမယ့် မြန်မာပြည်ဖွား မြန်မာတိုင်းရင်းသားညီနောင်များ....
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် ဘ၀ခရီးလမ်းကို လျှောက်လျှမ်းနိုင်ပါစေလို့
Posted by Army Soul at 10:30 AM0comments